Cinwaanka Twitter-ka Ee Donald Trump oo Hawada Laga Saaray. – Shabakadda Amiirnuur
Maqaallo, Maxaa Cusub, Wararka Dibadda, Wararka Gudaha
November 3, 2017 8:08 am by admin Views: 172
Cinwaanka uu barta Twitter-ka ku leeyahay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa la xaqiijiyay in hawada laga saaray shalay oo Khamiis ahayd sida ay xaqiijisay shirkada leh bartan xiriirka bulshada ah.
Shaqaalaha xafiiska madaxweyne Trump ayaa sheegay in muddo kooban oo uu xirnaa cinwaankan kadib hawada lagu soo celiyay iyagoo timaamay in khalad farsamo oo ka dhacay shirkadda ay arrintaasi sabab u noqotay.
Sidoo kale shirkadda ayaa sheegtay in cinwaanka Trump uu hawada ka maqnaa muddo 11 daqiiqo ah kadibna ay ku guuleysteen iney sidiisii kusoo celiyaan, waxaana socda baaritaan dheeri ah oo sababta lagu sameynayo.
Trumo ayaa aad u isticmaala Twitter-ka waxaana wararkiisa ku xiran 41.7 milyan, walina kama hadlin arrintan. Dadkii booqday ciwaanka madaxwaynaha fiidnimadii Khamiista wakhti kooban waxay arki kareen fariin oranaysa “ciwaankaas ma jiro!”.
Ciwaanka markii uu dib u shaqeeyay Trump wuxuu markii u horaysay soo dhigay qorshaha xisbiga jamhuurigu uu ku doonayo in uu ku dhimo canshuurta. Ciwaanka @POTUS, oo ah midka rasmiga ah ee madaxweynaha Maraykanka ayaa isugu sidiisii u shaqaynayay.
Trump wuxuu Twitterka ku soo biiray bishii Maarso ee 2009kii. Intaa wixii ka dambeeyayna si joogto ah ayuu u isticmaali jiray si uu ugu faafiyo afkaarihiisa, sidoo kale wuxuu ku weerarayay dadka ka soo horjeeday intii ay socotay ol’olihii doorashada ee 2016kii iyo intii uu xilka la wareegay bishii Janaayo.